Amanyathelo okuvelisa imephu usebenzisa i-drones-Geofumed
NgoJuni, 2017 GPS / Izixhobo, Topography
Isizukulwana semaphu esebenzisa le ndlela singabangela ingxaki enkulu, enye yezo ngxaki ibaluleke gqitha nemiphumo yokulahlekelwa iinyanga ezixabisekileyo zomsebenzi onomsebenzi xa ungenalo amava angaphambili kulo msebenzi.
Abasunguli be I-Aerotas Mapping System bathetha nathi kwinqaku POB Online, Abahloli abaninzi ingqalelo lo msebenzi, kokuthetha uhlobo moya ukufumana ngoko, kugxininisa ingxoxo lweempawu imveliso yokugqibela efuna ukufumana, evelisa ngenxa yoko, ubude kwexesha okungeyomfuneko ukuba izimvo.
Njengoko ejongene nale meko, kuyacetyiswa, ezikhokelela ngempumelelo kunye nenzuzo enkulu, ukuba siqale isiphumo ukuba ziphunyezwe, ekuqapheleni eyona ndlela ilandelelana umsebenzi ekufuneka wenziwe ukuphumeza ngakumbi software moya ukuze kufikelelwe isiphumo efunekayo.
Ngoko ke, sinokumisela amanyathelo e-3 ukwenza umsebenzi, okokuqala, qiniseka ukuba idatha eqokelelwe kwintsimi inokuthenjwa kwaye ilungile; ngoko, cwangcisa le datha ukuze ufumane i-orthophoto kunye ne-digital model model (DEM); Ekugqibeleni, usebenzisa umzekelo owenziwe, uvelise umbane kwi-AutoCAD (okanye efana) kunye 'nomsebenzi wemizila' (umsebenzi we-intanethi) kunye nophando lokugqibela. Masihlalutye amanyathelo athathwe ngokubanzi:
Ukuqokelela idatha echanekileyo kwintsimi
Ukuze amaqela enze uqokelelo oluchanekileyo lwengcaciso, kufuneka ukuba abaqhubi baye baqeqeshwe ngaphambili kwiindlela ezifanelekileyo ezivumela ukusekwa kokulawulwa komhlaba kunye nokuba neprojekthi yokuqhubela umzenzelo ozenzekelayo ukuba idale imifanekiso yegraphic mapping.
Kwimeko yohlengahlengiso lokulawulwa komhlaba, uqobo olufanayo olusetyenziswa kwi-photogrammetry oluqhelekileyo kufuneka luqwalaselwe. Le nto ibonisa ukuba kwasekwa iinjongo zihlalutywe ezi ngokuphakamisa emhlabeni esirhangqileyo, ngokuyinene kumisa iinjongo ezintlanu eziphaphazelayo ndawo, 4 kwi iikona kwaye nokuba uyakwazi ukubandakanya kwiinjongo ngokutsho iimpawu nganye kwiziko ngalinye (amanqanaba aphezulu okanye aphantsi).
Emva koko, lo yayizihambela umiselwe, kuthathelwa ingqalelo kancinci ngaphezulu ulawulo ngalinye kumacala omabini aze asithimbe imigca ezimbini iifoto ngaphaya itshekhpoyinti nganye usebenzisa ubuchule efana Google Earth evumela umkhondo indawo umhlaba imbonakalo-mfanekiso yeprogram Beka ukuphakama kwendiza.
Ukufumana i-orthophoto kunye ne-DEM
Isinyathelo sesibini kukucwangcisa iifoto ezithathwe yi-drone ukudala i-orthophoto kunye ne-DEM. Ngenxa yale nkqubo unokukhetha phakathi kwezixazululo ezininzi ezikhoyo kwiimarike eziqwalasela ukuba inkqubo ilandela imigaqo efanayo efanayo neefomgramm. Ngaloo nto sithetha ukuba iifoto ziphakanyisiwe ngokusekelwe kumaphuzu omhlaba abelwana ngawo ngokusebenzisa iifoto ezigqithisiweyo.
Simele sikhumbule ukuba iidrones zisebenzisa iikhamera ezincinci kunye ezingabonakaliyo xa kuthelekiswa nezo zisetyenziswa kwi-photogrammetry. Ngoko ke, ezininzi iifoto kufuneka zithathwe ukuze zifikeleleke. Oku kuthetha ukuba, kummandla ngamnye womhlaba, isixa esichukumisa phakathi kwe-9 kunye ne-16, ezenziwe ngeendlela zokwamukelwa kwemifanekiso esetyenziswe kwinkqubo ekhethiweyo ziza kuchonga 'amanqaku okuhleka' okwabelwana ngazo kwiifoto.
Ukukhutshwa komgangatho wokuphakamisa nokusebenza kwi-Intanethi
Ingaba eli nyathelo yokugqibela ukuba iinkampani ezininzi Consulting kwisaveyi kunzima ngakumbi ngenxa yokuba iinkqubo ezininzi ngumzekelo 3D (umzekelo Civil 3D) akukho luyilwe ukusebenza ngemizekelo kumphezulu enkulu eyakhiwe iinkqubo zokudya. Yingakho iisombululo zokuthunyelwa kweposi zivela njengezona zinto ezifanelekileyo kulo msebenzi.
Ngaloo, umcebisi ukhetha amanqaku omsebenzi ngokuchofoza kwiimpawu ezifunayo kumfanekiso wedijithali. Ngayinye yalezi zibhaliswe yiprogram njengombini wezilungiso.
ingongoma nganye ngoko ibekwe maleko ezithiywe iindibano emiselwe yi-Civil 3D (okanye ukusetyenziswa) ukuze xa uvula ifayile kule ndawo program kufuneka ifomathi efanayo naleyo evela kwisikhululo GPS standard lihamba okanye sisitishi esipheleleyo.
Ukulandela le ndlela yomsebenzi inokufezekiswa ngokukhululeka kwexesha kunye nemali kwiiprojekthi zeemephu zeprogram, ukuqikelela kwi-80% yokugcina ixesha. Singaqinisekisa oku ngokuthelekisa ukubanjwa kweengongoma ngokuhlolwa ngokuqhelekileyo okwenziweyo ngongcali kwii-60 amaphuzu ngeyure kunye namaphuzu e-60 athathwe kwisibini nge-software yokwenza i-post-processing.
Ekugqibeleni, khumbula ukuba intloko yokuphumelela kunye nokulondolozwa ngexesha lokusebenza uhlala ekuboneni ukulandelelana komsebenzi oza kuvelisa umphumo ofunwayo ngendlela efanelekileyo kakhulu.
Post edlulileyo«Edlulileyo Thelekisa iinguqu eziye zenzeke njenge fayile CAD
Post Next iingongoma Ngenisa usike umfuziselo imigodi ngekhompyutha kwifayile CADOkulandelayo "